Isa DNSCrypt Proxy pane Arch Linux | Kubva kuLinux
Nezuro ndakatumira chinyorwa chinoratidza maitiro ekuisa mukati Ubuntu chirongwa DNSCrypt Proxy iyo inobvumira encrypt DNS traffic yekufamba nekuchengetedzeka kukuru pakurwisa kunogona kuitika. Tichifunga kuti mune zvakataurwa ivo vakataura nezve maitiro ekuiisa mukati Arch Linux uye zvakaratidzika kunge zvisina kukodzera kuzvitsanangura mumupindiro mumwe chete, ndakafunga kuzviita mune chinyorwa chakasiyana.
Ino nguva, seyakanaka vapfuri vemiseve, isu ticha dhonza yakachena koni, uye isu tigoona kuti zvakamira sei seizvi zvakanyanya kana nekukurumidza uye nyore kupfuura muBuntu. 😉
En Arch tine mukana wekuti DNSCrypt Proxy iri mumahofisi epamutemo, saka kuiisa ingoshandisa Pacman:
Isu tinogonesa sevhisi:
Uye isu tinozvitanga:
Iye zvino tave kuzoita backup yefaira neiyo yazvino DNS:
Uye kutsiva zvirimo kuti ishandise localhost se nameserver:
Isu tinochidzivirira kuti chidzivirirwe kubva pakuchinjiswa nekutangazve kwega kwega:
Uye zvinongoramba zvichitangazve network maneja. Kana uchishandisa Network Manager tinoita izvi:
Uye zvapera, ndizvozvo DNSCrypt Proxy yakaiswa zvakanaka uye yakagadzirirwa. Kuti titarise isu tinogona tinya pano uye uone kana iri meseji yekugamuchira kubva OpenDNS.
Aya matanho anoshanda kune yekutanga kuiswa kwe DNSCrypt Proxy in a Arch Linux yakapusa ne Network Manager, asi sezvo ini ndichiziva kuti zvirokwazvo une mhando dzese dzekushamisa masisitimu ako kana iwe uri kufarira kushandisa mukana wepurogiramu ino zvakanyanya, ndinokukoka kuti ubvunze chinyorwa pa DNSCrypt pawiki Arch Linux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Isa DNSCrypt Proxy pane Arch Linux
Ndiri kuzofunga kuti iyo NSA iri shure kwako ... kuti urikupfuudza ruzivo ku Snowden kana chimwe chinhu chakafanana neLOL!
Ndiri kukupa iwe ruzivo rwese rwandinarwo nezve izvo sepsis zviitiko nemhuka chaidzo dzaunozvipira iwe, jojojojojo.
Thanks che! Uye kana pachinzvimbo cheNetworkManager ini ndinoshandisa Wicd, ini ndinongo gadzira iyo shanduko kana ndichitangazve maneja?
Ndizvozvo, zvinongova kuchinja mutemo wekupedzisira weizvi:
Hehe, yakanaka tip, unogona kundibatsira nezvakanaka zvandiinazvo kana ndichishandisa OpenDNS
MuWikipedia vane tsananguro izere: http://es.wikipedia.org/wiki/OpenDNS
Ini ndakagadzirisa Tor uye inoshanda zvakakwana. Gadzira DNSCrypt Proxy uye inoshanda zvakakwana, asi pasina iyo Tor sevhisi, iyo isina Tor proxy. Mubvunzo unogona ese masevhisi kushandiswa panguva imwe chete.
Ini ndinofunga ndakaverenga kuti iwe unogona kushandura madoko anoshandiswa neDNSCrypt, ini handizive chaizvo kuti sei.
Yakashanda zvakakwana kwandiri muAntergos.
Thanks shamwari nekukwazisa.
Ndatenda, zvinoshanda zvakanaka.
Kuisirwa uye kushanda muManjaro. Thanks 😀
Ndangoisa. Ndinovimba kuona misiyano uye kuti inoenderana nezvarinotaura pawiki heh
Iko kune nzira yekuve neakasiyana IP nekuisa chimwe chinhu chakafanana uye kwete, semuenzaniso, addon senge Anonymux kana vamwe?
Sezvineiwo. MuFirefox, neAnonymox yakavhurwa, inondiudza kuti haina kuiswa asi kana ndikaidzima, zvinondimaka kuti opendns iri kushanda.
Pindura kune dtulf
Mhoro Mazuva mashoma apfuura ini ndakaisa Dnsmasq uye pandakaenda pawebhu chii chekuisa kutarisa kana opendns iri kushanda inondiudza hongu, kunyangwe zvakadaro ndinofanira kuisa dnscrypt kana kuti ndinoisiya sezvazviri?
Pindura kuna obadiahriver
Mubvunzo wa noob uye kana ini ndichida kubvisa tarisa iyo faira "resolutionv.conf" ndeupi murairo wandinoshandisa?
Pindura kuna Yeezus
ne chattr -i /etc/resolv.conf iwe unobvisa kudzivirira
Ndakagadzirisa zvese uye kana ndikavhura iyo OpenDNS peji inondiudza kuti handisi kuishandisa, sevhisi iri kumhanya uye inogadzirisa mamwe mawebhu pasina dambudziko, uye ndaisa iyo nameserver 127.0.0.1 mu resolutionv.conf, chero mazano ?
Kugadziriswa, iko kunoto shanda ^^ maita basa kwazvo nekuda kwedzidziso
Ndinoziva sei kana iri kushanda sezvo webhusaiti yeopendns inondiudza kuti haishande, asi ini ndakatevera nhanho dzetsamba. Ndakaverengawo izvi:
Hazvizomboratidze pane iyo OpenDNS peji ratiri kushandisa sevhisi, nekuti dnscrypt nekumisikidza inoshandisa dnscrypt.eu-nl kugadzirisa mazita, haichashandisi OpenDNS nekumisikidza, kushandisa OpenDNS unofanirwa kugadzirisa iyo dnscrypt-proxy.service